Posted by မေဓာဝီ at 11:55 PM
I love this poem,ama.
wanna sharing and keep my memory.
12/24/2010 1:05 AM
အင့် အင့် ဟင့်..အင့် အင့် ဟင့်...
မမမေအတွက် သားသားသန့်။။။ :P
12/24/2010 1:26 AM
ကဗျာလေးက ချစ်စရာလေး.. ဖတ်ရင်းနဲ့ပြုံးမိတယ်..း)
12/24/2010 2:54 AM
၀ုတ်ဒယ် အစ်မ ကြက်ဥခြောက်လုံးကွာလဲ နှင်းရဲ့ ဂယက်ပဲ
12/24/2010 4:45 AM
ဟိုတနှစ်က ကြက်ဥမကဘူး နဖူးတောင်ကွဲတယ်
ရယ်စရာလေး.. ချစ်စရာလေး.. ကဗျာလေးက။ စပ်တတ်လိုက်တာ..
နှင်းတောင်တွေ ကြည့်ပြီး သွားကြည့်တာ ဒီဖက်
ရောက်တော့ နှင်းဒုက္ခနဲ့ အပြင်တခါ ထွက်ဖို့
အ၀တ်အစား သယ်ရတဲ့ မလွယ်ဘူး .... :P
12/24/2010 8:57 AM
နှင်းကျတယ်ဆိုတာ မီးခိုးထွက်သလောက်ပဲမြင်ဖူးတော့ နှင်းဖြူဖြူကြီးတွေထဲ လမ်းထွက်လျှောက်ချင်တာ အနွေးထည် အထူကြီးကို ၀တ်လို့ ပြီးတော့ ချစ်သူနဲ့ လက်ချင်းချိတ်လို့ပေါ့ (မရှိတာခက်တယ် )
နှင်းတွေကို သိပ်သဘောကျတယ်...။ကျဆို ကိုယ်က
အဲဒါ ဆေးနည်းဗျား။ ။
အအေးဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့ ကြက်ဥအကွဲကို ကြော်စားပါလို့ ဆေးနည်းပေးခဲ့တယ် မမေရေ.. ခိခိ
နှင်းတွေက အေးပေမဲ့ လှလိုက်တာ
မမြင်ဖူးတော့လည်း ဒီလိုပါဘဲ လေ။
ပျော်စရာ ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ မမေရေ...
12/24/2010 2:50 PM
မမမေဓာဝီ... စာလာဖတ်သွားတယ်။ ရို့စ် ရောက်နေတဲ့ ဒီ Europe ဘက်မှာလည်း အရမ်းအေးတာပဲ။ ဒီမှာက ယူအက်စ်၊ အင်္ဂလန်ထက် ပိုအေးတယ် အစ်မရေ... ခိခိး) အစ်မရေးတဲ့ ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး ရယ်မိတယ်
ဟ ဟ ဟ ဟ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး ပေါက်ကရလို့မထင်မိပါ၊
12/25/2010 5:05 AM
ပြေပြေပြစ်ပြစ်ရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတပုဒ် ထက်တောင် ကဗျာက ပိုပေါ်လွင်နေသေးတယ်
တော်ချက်ဗျာ..။ မြင်ကွင်းကို ရှင်းခနဲပဲ။
12/27/2010 7:41 PM
တကယ်ပဲ မမေရဲ့ ကဗျာက ချစ်စရာ ကလေးကဗျာလေး...
အသံထွက် ရွတ်ကြည့်ရင် ပိုချစ်စရာကောင်းတယ်...း))
ကော်မန့်တွေက ကဗျာတွေပါ ရွတ်သွားတယ်...
12/30/2010 2:05 AM